Muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu dilay K/Africa iyo boolisku Koofur Afrika oo baaris wada. – idalenews.com
Idalenews- wararka ka imaanaya dalka Koonfur Africa ayaa sheegay in 48kii saacadood ee ugu dambeeyey dalkaasi lagu dilay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ganacsato ahaa, iyadoo ay Boolisku baarayaan meydadkaasi.
Dadka la dilay oo tiradoodu gaarayso 3 qof oo dhalinyaro Soomaaliyeed ah ayaa ku ganacsanayay Magaalada Limbobo ee dalkaasi K/Africa, waxaan dilkooda xaqiijiyay Cumar Maxuud Cumar Kiyo oo ku sugan dalkaasi, isagoo intaasi ku daray in Kooxo burcad K/Africaan ah ay Dadkaasi dukaamadooda dhexdfooda ku gubeen.
“Dhallinyaradii la dilay Waxaa ka mid ah Allaha u naxariistee Cali C/llahi Caymow iyo Cali Maxmuud,dukaamadooda ayaa loogu tagay, laguna gubey, meydadkooda hadda waxaa gacanta ku haya booliska oo sheegaya in ay baarayaan, balse ilaa iyo hadda wax jawaab rasi ah lagama hayo”, Ayuu Yiri Cumar Kiyow.
Dalka Koonfur Africa ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay weeraro iyo dilal qorsheysan oo ka dhan ah dadka ajaanibta ah ee ku nool dalkaasi oo ay Soomaalidu ku jirto.